Harare, Zimbabwe(News of the South)-Zimbabwe’s ..
Mugabe Not Attending Mnangagwa’a Inaguration
Harare, Zimbabwe(News of the South)-President ..
Chatunga Mugabe Cancels Tekno Zimbabwe Show
The much awaited Techno Zimbabwe show has ..
Transitional govt threatens MDC Alliance
Harare, Zimbabwe(News of the South)-FISSURES ..
The Time For New Generation Leaders
Noah Mangwarara. Zimbabwe requires a new ..
By Correspondent , 23 , Nov 2017
Harare, Zimbabwe(News of the South)-Zimbabwe’s economic growth is threatened by high government spending, an untenable foreign exchange regime and inadequate reforms, a senior International Monetary Fund (IMF) official said. .. Read More →
Harare, Zimbabwe(News of the South)-President Robert Mugabe will miss the inauguaration of former vice president Emmerson Mnangagwa as the next president of Zimbabwe. According to the state-controlled Herald newspaper, .. Read More →
The much awaited Techno Zimbabwe show has been cancelled. Event host Chatunga Bellarmine Mugabe announced the cancellation on his facebook page on Friday morning, his statement reads as: It is .. Read More →
Harare, Zimbabwe(News of the South)-FISSURES are reportedly creeping in the MDC Alliance on whether to join an envisaged transitional government or not amid indications political party principals have divergent views .. Read More →
Noah Mangwarara. Zimbabwe requires a new generation of leaders; not those who come from the womb and wait for their time because they are of age but men and women .. Read More →
Harare, Zimbabwe(News of the South)-Zimbabwe’s former president Robert Mugabe was granted immunity from prosecution and assured that his safety would be protected in his home country as part of a .. Read More →